बार्सिलोनाको सुखद लिग यात्रा !! मेस्सीले गरे ह्याट्रिक !! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
बार्सिलोनाको सुखद लिग यात्रा !! मेस्सीले गरे ह्याट्रिक !!
च्याम्पियन लिग फुटबल लिग खेलमा सबै भन्दा ठुलो मानिने चाम्पियन लिग २०१८-२०१९ आजबाट सुरु भएको छ। आज भएको उद्घाटन खेल बार्सिलोना बिरुद्ध पी.एस.भी र स्पर्स बिरुद्ध इन्टर मध्य बार्सिलोना विजयी भएको छ भने यता अर्को खेलमा इन्टर बिजयी भएको छ।
बार्सिलोनाका नया कप्तानका रुपमा प्रवेश भएका अर्जेन्टिनी खेलाडी जो ला लिगाका स्टार मान्न सकिन्छ- लिओनल मेस्सी उनले यस उद्घाटन खेल र युएफा च्याम्पियन लिगमा असरदार सुरुवात गरेका छन्। पी.एस.भी विरुद्धको [पहिलो खेलमै मेस्सीले ह्याट्रिक गोल गर्न सफल भएका छन्। उनले पहिलो गोल भने सेट पिस मार्फत गरेका थिए।
३१ औ मिनेटमा पाएको फ्री किकलाइ उनले गोलमा बदल्दै खेलमा ७७ र ८७ मिनेटमा गरि3गोल गर्दै टिमलाइ3अंक दिलौना सफल बने। साथै खेलमा पी.एस.भी कुनै प्रयास् मार्फत फर्किन सकेन तर बार्सिलोनाका समुल अमटिटिले भने २ पहेलो कार्ड खादै खेलबाट ७७ औ मिनेटमा बाहिरिन पुगे।
यता इन्टर मिलान भने अन्तिम ९०+२ मिनेटमा गोल गर्दै3अंक बटुलेको छ । प्रिमिएर लिगका स्पर्सलाई अन्तिम समयको गोलले3अंकबाट चुक्न पुगे पहिलो गोल भने स्पर्सबाट क्रिसिटियन एरिक्सनबाट भएको थियो। इन्टरका निम्ति इकार्दी र वेनिसोले एक एक गोल गरे।
अन्य खेलको अपडेट हुदै छ!!!